Fanajana ny maha olona mandritra ny famonjana : voafonja 9 212 niantefan’ny tetikasa | NewsMada
Fanajana ny maha olona mandritra ny famonjana : voafonja 9 212 niantefan’ny tetikasa
Nanomboka, ny taona 2014, nametraka ny tetikasa fanajana ny maha olona mandritra ny famonjana sy fanomanana ireo voafonja hiverina eny anivon’ny fiarahamonina ny Handicap international. Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fitsarana izay manana sampana momba ny fiahina ny maha olona ny fikambanana. Manohana koa ny fiarahamonina sivily ary mamatsy vola ny Agence française de développement (Afd). Nanaovana ny asa ny toeram-pamonjana ao Toamasina, ao Vatomandry, any Toliara ary any Mahajanga miampy ny toerana fandraisana ireo ankizy mamita sazy eny Antanimora.
Niantefan’ny tetikasa ny voafonja 9 212 tao anatin’ny telo taona mahery. Tafiditra amin’ny andraikitra natao ny fanatsarana ny fahazoan’ny voafonja misitraka ny tolotra ara-pitsaboana ho an’ny tany Toliara, Toamasina, Vatomandry ary Mahajanga. Nizarana savony 93 753 koa ny toeram-pamonjana ahafahany midio. 30 578 ny marary notsaboina ary nampiana ny tahirim-panafody. 70% tamin’ireo voatery naiditra hopitaly noraisin’ny tetikasa an-tanana.
Ankoatra ny fikarakarana ny fahasalamana, omena tohana ara-tsaina ny voafonja ary ampianarina mamaky teny sy manoratra ny 2 062.
2 409 ny voafonja nanaovana tantsoroka ara-tsaina. 1 126 kosa nampiana hiverina eny anivon’ny fianakaviany.
Amidy ny asa tanan’ny voafonja ao Ambatondrazaka
Nanangana toerana iray ahafahana mivarotra ny asa tanan’ny voafonja ao Ambatondrazaka ny Medical international sy ny Comité de soutien aux personnes détenues. Rary, vy voatefy, biriky vitan’ireo voafonja taorian’ny fanofanana azy ireo no amidy ao. Ny vidin’ny vokatra, homena ilay voafonja nanao azy hamelomany ny tenany rehefa hiverina any amin’ny fianakaviany izy aorian’ny famonjana. Ampianarina sy hofanina amin’ny informatika ny zaza tsy ampy taona.